Maqaali: Aragti gaaban iyo alalaas gundhigay!
Maqaal: Aragti gaaban iyo alalaas gundhigay!
Dhaqan ahaan, qofka marka xil Dhaqameed loo dhiibayo inta badan geyaga Soomaalida waxaa caado ka ah in Caano lagu daadsho, taa oo ka dhigan maraasimta iyo baratakoollada meesha ay siyaasadda uga jiraan, waa dhaar, waa ballanqaad, waa khudbo dareemaysan, waa hidde, waa ab laga soo gaar, waa isir raac, waa hayb ku dherersan sooyaalka.
Aqriste, aan wax yar dib ku celsho, markii Shariif Sakiin xilka laga qaaday, ee la damcay in la doorto Guddoonka cusub ee Baarlamaanka waxaa isla sida Jawaari loo tanaasulay Madoobe Nuunow, oo isna noqday DUUB AAN CAANO lagu daadin, aanse shaqayn, maadaama la cuuryaanshay, bal isu eeg, isna wuxuu ku guulaystay wareeggii 1AAD, maxaa yeelay waxaa tanaasulay dadkii la tartamayey, in la isu tanaasulo ma ahan wax xun, ee dhibka yaa ah, in marka loo baahan yahay inuusan lehin, balse, marka aan loo baahnaynse lala soo wada afbuuran yahay.
Weydiimahan waxaa nooga jawaabay Wasiirka Dastuurka iyo Dib u Heshiisiinta C/raxmaan Xoosh oo gaar ahaan Guddiga Dastuurka ku eedeeyey inay lacagtii loogu talagalay Dastuurka Hotel-lo ku yaal Kenya iyo Uganda ku seexdeen, haddaba, is weydiinta yaa ah, mudane Xoosh markii lacagtan la cunayey muxuu u sheegi waayey? Muxuu si laab la kac ah ugula soo booday markii ay is qabteen oo khilaaf soo kala dhexgalay ka dib? Dhanka kale, lacagaha qaraashaadka ah ee ku baxay, wasaaraddiisu miyeysan ogayn, maadaama ay soo hoos galayso miisaaniyad sanadeedka wasaaraddiisa?. Warar aan la xaqiijin ayaa tilmaamaya, in Guddiyadan maalintii la magacaabay ilaa intii laga kala diray ay ku baxday qarash badan, aqriste lacagtu ma yaree, bal kurisga xajiso, inta aanan kuu sheegin, waa inaan kuu sii digaaye, waxaa lagu beelay beeso dhan Soddon Milyan Dallar [30Milyan$] haddaba, yaan la oran dalku muxuu Sabool u yahay? Illeen Yuubatadan ayaa wixii soo galiba u yuurartee!
Gunaanad Ugu dambayn, miyeysan nagu fillaan inta aan soo mashxaradnay? Murti baa dhahaysa: “Nimaan waxa soo scoda garan, waxa jooga(Socda)na ma garto!” sow kama fogo haddii sooyaalkii la hilmaamay, oo ma noqonayso: “Illawsho dhawaa ma Umulaa!” Aqriste, dib u xasuuso, Jabhadkii wadanka Jabshaha la soo galay, anagaa ku soo dhawaynay alalaas iyo masharaxad, Qabqablaha anaga ayaa qaab u yeelnay, kana dhignay wax uusan ahayn, Wadaadka anagaa waallida ku garab siinnay, Prof iyo Dr Qabyaaladda beegaya anagaa u qiillinay.Waa halkuu Abwaan Maxamed Ibraahin Warsame “Hadraawi” ka yiri Gabaygii “Gudgude”: